Ukubona iRock Rock emangalisayo - Amagumbi amaninzi kunye Nezinto Eziyimfihlo - I-Airbnb
Ukubona iRock Rock emangalisayo - Amagumbi amaninzi kunye Nezinto Eziyimfihlo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguStephana
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uStephana iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Sikumgama omncinci wendlela engaqhelekanga, ekwiStoneridge Business District ekumantla weSixeko saseKimberling. Iyunithi yethu inamagumbi okulala ayi-2, ibhafu eyi-1, ikhitshi elipheleleyo, indawo yokuhlamba impahla negumbi lokuhlala elinendawo entle. Indawo yethu inokuhlala abantu abayi-5. Yonke ifenitshala yegumbi lokuhlala elitsha iza kufika phakathi kuAprili 2020.
I-Loft Lakeview Suite yindawo yokuqeshisa yasebusuku ebukekayo kwiTable Rock Lake. Sikumgama omncinci wendlela engaqhelekanga, ekwiStoneridge Business District ekumantla weSixeko saseKimberling. Iyunithi yethu enye inamagumbi okulala ayi-2, ibhafu eyi-1, ikhitshi elipheleleyo, indawo yokuhlamba impahla negumbi lokuhlala elinendawo entle. Kukho indawo eninzi. Igumbi Elinye Lokumkanikazi, Igumbi Lokumkanikazi kunye nebhedi Yesofa zigcwalisa amalungiselelo okulala.
Isibonelelo esivela kwiVino cellars Family. Ngaphantsi komgangatho iindwendwe zinokutyelela iVino cellars kwiLake kunye neBistro 58 ngexesha lokusebenza ngoLwesibini-Saturday.
4.80 · Izimvo eziyi-237
IStoneridge Business District yindawo ethe cwaka ecaleni kwe "Old Hwy 13." Le ndawo ilungele ukuhlala uxolo lwengqondo apho kungekho mfuneko yokuba ulwe nabantu abaninzi. Ukufutshane nechibi leTable Rock elinokungena kwiSixeko saseKimberling kunye nokukwazi ukuya ngokukhawuleza eBranson ukuze uzonwabise apho.
Umbuki zindwendwe ngu- Stephana
Silapha ukuze sikwamkele xa ufika, kodwa ke sidla ngokuzishiyela iindwendwe. Iindwendwe zivumelekile ukuba zisijoyine ezantsi eVino cellars eLake ngexesha lomsebenzi.